Madasha Dalxiiska Caalamiga ah waxay Maqashaa Baahida Muuqashada ee Caadiga Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Madasha Dalxiiska Caalamiga ah waxay Maqashaa Baahida Muuqashada ee Caadiga Cusub
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Indho Indho Indoneesiya • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Seychelles • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wtn
Madasha Dalxiiska Caalamka
Madasha Dalxiiska Caalamiga ah (GTF) ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta, Sebtember 16, 2021, Jakarta, Indonesia. Munaasabadda ayaa kulmisay hoggaamiyeyaasha qaybaha adduunka oo dhan si ay isku weydaarsadaan fikradaha ku saabsan xaaladda ay hadda ku sugan tahay dalxiiska iyo soo dhoweynta.
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, Alain St. Angle ayaa ku nuuxnuuxsaday Madasha Dalxiiska Caalamiga ah ee Jakarta, in dalxiisku u baahan yahay taageero siyaasadeed maadaama ay weli fure u tahay guusha warshadaha.
Wuxuu sheegay in Dowladda Indonesia ay leedahay awoodo badan oo dalxiis oo dalku ay tahay inuu isticmaalo wax kasta oo uu awood u leeyahay si kor loogu qaado muuqaalka.
St. Ange waxay tilmaamtay in booska cusub ee COVID caadi ahaan, ay muhiim tahay in la qaddariyo in goob kasta oo loo dalxiis tago ay ka kalluumaysan doonto isla harada.
Alain St.Ange, Seychelles oo hore u ahaan jiray Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha & Wasiirka Badda haddana ah Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) iyo xubin aasaasi ah Shabakada Safarka Aduunka (WTN), ayaa shalay ka hadlay Madasha Dalxiiska Caalamiga ah oo lagu qabanayay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia.
Cinwaanka St.Ange, oo qayb ka ah guddi dood, ayaa aad looga sugayay Afrika maadaama la ogaa inuu hormuud u ahaa kordhinta xiriirka ganacsiga iyo dalxiiska ee ka dhexeeya Afrika iyo ASEAN Block. Alain St.Ange, oo ah Lataliye Dalxiis oo fadhigiisu ahaa Indonesia in muddo ah, wuxuu ka shaqeynayay FORSEAA (Forum of Small Medium Economic AFRICA ASEAN) si uu ganacsiga iyo dalxiiska ugu riixo Afrika dalalka ASEAN.
St.Ange, oo xubin ka ah guddiga sidoo kale Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee dhowaan la bilaabay ayaa ka shaqeyneysa sidii loo kordhin lahaa aragtida meelaha dalxiiska loo tago iyo in cod dheer la siiyo safarada yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo meheradaha dalxiiska ee adduunka oo dhan oo aan ahayn la yaab leh in la maqlo xiisaha qaaradda ee ku saabsan cinwaankiisa.
St.Ange wuxuu ku bilaabay isagoo carrabka ku adkeeyay in dalxiisku u baahan yahay taageero siyaasadeed maadaama ay taasi fure u tahay guusha warshadaha isagoo u hambalyeeyay Madaxweyne ku -xigeenka iyo Wasiirka Dalxiiska oo labaduba goob joog ka ahaa daabacaadan Madasha Dalxiiska Adduunka. Wuxuu sii waday inuu riixo maadaama uu xusuusinayo Dowladda Indonesia fursadaha badan ee dalxiis ee Indonesia ay ku barakeysay, laakiin wuxuu yiri “kartida iyo maalgashiga noocaas oo kale ah ee lagu hormarinayo waa la khasaari doonaa haddii Indonesia aysan adeegsan wax kasta oo ay awooddo si kor loogu qaado muuqaalka dalka."
Alain St.Ange ayaa sidoo kale tilmaamay in sida caadiga ah ee cusub iyo sidii COVID-ka dib ayaa laga doodayaa, waxaa muhiim ahayd in la qaddariyo in goob kasta oo dalxiis loo tago ay ka kalluumaysato isla harada dadka soo booqda ee garashada leh iyo in meesha ugu hal-abuurka badan oo la diyaariyey ay si fiican ugu habboon tahay in la isku duubnaado ganacsiga COVID-ga kadib.
St.Angespoke waxay ka hadashaa suuqyada niche laga soo bilaabo kii hore ilaa dalxiiska beeralayda, dalxiiska diinta, dalxiiska isboortiga, dalxiiska xalaasha ah, iwm, iyadoo la sheegayo in dhagax walba loo rogo raadinta suuqyada dalxiiska ee cusub.
Waxa uu waqti ku bixiyey in uu faahfaahiyo baahida loo qabo in la dejiyo koorsada dalka ka dibna la gaarsiiyo adeeg u dhigma qiimaha, isaga oo maanka ku haya in dalku yahay meesha loo socdo iyo in dalku u baahan yahay in la diyaariyo ka hor inta qof ka mid ah guddiga xoojin lahaa “socodka hadalka ”ayaa hadda ka muhiimsanaa sidii hore.
Wasiirkii hore ayaa tilmaamay muhiimada ay leedahay in lagu biiro ciidamada dariska iyo saaxiibada wuxuuna tusaale u soo qaatay Afrika iyo Guddiga Dalxiiska Afrika oo tusaale u ah in qaarad u baahan warshadeeda dalxiiska oo ay u baxdo si ay u shaqayso.
Madasha Dalxiiska Caalamiga ah ee 2021 waxaa lagu arkay Madaxweyne ku-xigeennada Indonesia iyo Ra'iisul Wasaarihii hore ee UK iyo sidoo kale Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee UNWTO, iyo Wasiirkii Dalxiiska ee hadda iyo kii hore ee Indonesia oo dhammaantood ku qoran liiska Madaxweynaha Madasha Dalxiiska Caalamiga ah.